waa maxay USB 3.0 HUB? | Huachuang Elektaroonig ah
Heerka USB 3.0 ee la soo bandhigay sanadkii 2008 wuxuu ballanqaaday inuu si heer sare ah u kordhayo heerka wax soo saarka marka la barbardhigo USB-ga teknoolojiyadda ka horreeyay ee 2.0. Sababta oo ah xaqiiqda ah in USB 3.0 uu la jaan qaadayo tikniyoolajiyaddii hore, aaladaha duugga ah ayaa wali awood u leh in lagu adeegsado xarun cusub oo ah USB 3.0.
Soo Koobid Faa'iidooyinka USB 3.0
10x ka dhakhso badan USB 2.0
Kusoo dhawow qalabka USB 2.0
Waa maxay sababta loo adeegsado USB 3.0 xarun?
Waxaa jira sababo badan oo ah sababta ay tahay inaad u isticmaasho qalabka USB 3.0. Mid ka mid ah sababahaas ayaa ah inaad adigu ka fikirto mustaqbalka tikniyoolajiyadda. Si dhaqso ah ama waqti dheer, aaladaha dhamaadka ee taageeraya heerka USB 2.0 ee suuqa ayaa ka bixi doona suuqa. Tani waa waxa ugu muhiimsan marka aad tixgeliso in hal abuur cusub la soo saaray, kaas oo loo yaqaan USB 3.1 (SuperSpeed ​​+). USB 2.0 sidaa darteed waa uu hoos u dhacayaa waana la iska indhatiri karaa, maadaama USB USB hubku sidoo kale maarayn karo aaladda dhamaadka dhamaadka leh tikniyoolajiyadda 2.0 si kastaba. Haddii aaladaha dhamaadka dhamaadka ee leh isku xirka USB la iibsado, waxaa had iyo goor la siiyaa USB 3.0.
Xarumaha hadda jira ee USB 3.0
Hadaad iibsato xarun USB ah oo aad leedahay aaladaha dhamaadka ee taageera USB 3.0, waad isticmaali kartaa, laakiin markaa waa inaad sameysaa iyadoo aan faa iidada xawaaraha weyn ugu jirin USB 3.0. Taasi macno malahan farsamo ahaan ama dhaqaale ahaan. Haddii xarun lagu rakibo kaabayaasha jira, doorashada xarunta USB 3.0 xarun ayaa si aad ah loogu talinayaa.
Sidee dhakhso leh u gudbinta xogta iyada oo loo marayo USB 3.0 xarun?
Heerka wareejinta ee xarunta USB 3.0 waxay kuxirantahay dhowr arrimood. Si loo gaaro xawaaraha ugu badan ee suurtagalka ah ee wareejinta xogta, waxaa lama huraan ah in dhammaan qaybaha iyo aaladaha ku lugta leh ay taageeraan heerka USB 3.0. Tusaale ahaan, si loo wado drive adag ee dibedda ah si loo gaaro waxqabadka ugu sarreeya inta lagu jiro qorista iyo akhrinta helitaanka, dekada USB-ga weyn ee dhextaalka ah, xarunta USB-ga iyo wadista adag ee dibedda waa in si cad loogu talagalay USB 3.0. Tan waxaa laga arki karaa walxaha buluugga ah ee ku dhexjira korantada iyo meelaha la geliyo USB.
Maxaa dhacaya haddii aan ku xiro aaladda USB 2.0 aaladda USB 3.0 xarun?
Mabda 'ahaan, waxba ma dhici karaan oo dhaawici kara xarunta USB 3.0, aaladda dhammaadka ama barta weyn. Si kastaba ha noqotee, waa inaad ku noolaataa xawaare aad u hooseeya haddii mid ka mid ah waxyaabaha aan soo sheegnay uusan taageerin USB 3.0.
Ma jiraa xarun USB 3.0 oo bixisa howlo kala duwan oo gaar ah?
Dhab ahaantii waxaa jira USB USB xarun sida. Noocyo kala duwan ayaa la heli karaa. Qaar waxay taageeraan WLAN, kuwa kale waxay leeyihiin aqriyaha kaararka aqriska leh sidaa darteedna uma shaqeeyo kaliya udub dhexaadka udhexeeya aaladda USB, laakiin sidoo kale waa xarun kontaroola akhrinta kaararka SD.